उपचुनाव लड्न किन डराए बादल ? - बिरगंज खबर उपचुनाव लड्न किन डराए बादल ?
यस्तो छ मतदाताको अंकगणित माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दुई साताअघि एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, विपक्षी मोर्चाबाट संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी घोषणा भएको भोलिपल्टै बादल चुनाव लड्न हच्किएका छन् । एमालेले स्थितिको विश्लेषण गरेर मात्रै उम्मेदवार तय गर्ने बताएको छ ।
वकोटाको उम्मेदवारी परेपछि एमालेका ५७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ओलीको पक्षमा ३४ जना र नेपालको पक्षमा २२ जना बाँडिने देखिएको छ । नेपाल समूहमा माओवादीका २३, काँग्रेसका २२ सांसद जोड्दा ६७ हुन जान्छ, जुन ११० सांसदको बहुमत हो । यसमा ८ सिट रहेका साना दलमध्येबाट पनि धेरैले विपक्षी गठबन्धनलाई नै सघाउने देखिन्छ ।
यसरी माधव नेपाल समूहले बादलको विकल्पमा उम्मेदवार खडा गरेपछि आगामी जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपचुनावमा नेकपा एमालेको ओली पक्षले पराजय व्यहोर्ने निश्चित भएको हो । अब उसले बादलको ठाउँमा कसलाई खडा गर्छ, त्यो मंगलबार टुंगो लाग्ने छ । किनकि, मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको दिन हो । स्रोत रातोपाटी